Hiroshima iyo Nagasaki:- Godka La Hilmaamay Ee Laga Qoday Macdanta Laga Sameeyay Nukliyeerka | Gaaroodi News
Hiroshima iyo Nagasaki:- Godka La Hilmaamay Ee Laga Qoday Macdanta Laga Sameeyay Nukliyeerka
Doorka ay Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ee Congo ku lahayd sameyntii bambooyinkii lagu dhuftay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki, waxaa la qarinayay oo sir ayey ahayd, muddo tobannaan sano ah, laakiin dhaxalka laga helay ku lug lahaanshaheedii ayaa ilaa maanta la dareemayaa.
“Erayga Shinkolobwe wuxuu igu abuuraa murug iyo boholyoow,” ayey tidhi Susan William, oo ah taariikh-yahan ku sugan Machadka UK ee Barashada Culuumta Dalalka Barwaaqa Sooranka ah.
“Ma ahan eray farxad leh, waa mid isoo xasuusiya musiibo iyo dhib weyn.”
Magaalada Hiroshima ee dalka Japan, oo ku taalla meel u jirta masaafe ka badan 7,500 oo meyl, ayaa 6-da bisha August lagu xasuustaa wixii ka dhacay halkaas 75 sano ka hor, xilligaas oo bamkii atoomigga ahaa ee lagu burburiyay magaaladaas.
Munaasabad noocaas ah kama dhaceyso Jamhuuriyadda Dimuqraaddiga ah ee Congo (DRC). Haddana sidaas oo ay tahay, labada waddanba waxaa mideynaya taariikhda bamka atoomigga ahaa, taas oo saameynteeda la dareemo illaa maanta. Macdanta Uranium ee Shinkolobwe waxaa iibsaday Mareykanka si uu uga sameysto hub atoomig ah ee lagu garaacay Japan, sannadkii 1945.
“Marka aan ka hadalno bambooyinkii lala dhacay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki, waligeen kama hadalno Shinkolobwe,” ayuu yidhi Isaiah Mombilo, oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka Congo ku matalada ururka dalka Koonfur Afrika (CCSSA).
“Qeyb ka mid ah dagaalkii Labaad ee Adduunka ayaa la illoobay, dibna looma xasuusto,” ayuu hadalka ku sii daray.
Godka macdanta laga qodo ee Shinkolobwe – oo loogu magac daray tufaax la dhex dhigay biyo karkaraya oo qofkii gacanta ku qabta uu ku gubanayo – waxaa laga soo saaray ku dhawaad dhammaan macdantii uranium-ta ahayd ee laga farsameeyay bambooyinkii atoomigga ahaa ee lagu garaacay Japan,
Laakiin sheekada la xiriirta godkan macdanta laga qado weli wey taagan tahay. Doorkii uu ku lahaa sameynta bambooyinkii lagu kala magacaabay “wiilka yar” iyo “ninka buuran”, waa kuwa saameynta ugu weyn ku yeeshay taariikhda siyaasadeed ee burburka ku saleysan ee dalka Congo iyo waliba dagaalladii sokeeye ee tobannaanka sano ka socday dalkaas.
Xitaa maanta, dhaxalkii godkaas laga reebtay ayaa laga arki karaa nooca uu yahay caafimaadka bulshada agtiisa ku dhaqan.
“Waa musiibo iska socota,” ayey tidhi Williams, oo qiimeyn ku sameysay doorkii uu godka Shinkolobwe ku lahaa dhacdadaas, oo ay uga hadashay buuggeeda ay ku magacowday jaajuusiinta jooga Congo.
Waxay aaminsan tahay in loo baahan yahay aqoonsi weyn oo ku aaddan doorka ay dhibaatooyinka ka taagan Congo ku leeyihiin jacaylka iyo rabitaanka ay dalalka reer galbeedka u qabaan in ay iska maamushaan macdanta godkaas.
Mombilo ayaa ah qof u ol’oleynaya in sare loo qaado wacyigalinta ku saabsan doorka ay Congo ka qaadatay natiijadii ka soo baxday dagaalkii Labaad ee Adduunka, iyo waliba dhibaatada ay ilaa maanta ugu jirto arrintaas darteed. Sannadkas kasta, dadka ku nool Hiroshima waxay xusaan dhacdadii bamka ee lagu duqeeyay magaalada kaas oo ay ku dhinteen illaa 135,000 oo qof.
Sannadkii 2016-kii, shir ay ururka bulshada rayidka Congo ee Koonfur Afrika (CCSSA) yeesheen ayaa la isugu geeyay dad u dooda xuquuqda, kuwa taariikhyahanno ah, iyo falaqeeyayaal iyo carruurta dadkii ay waxyeelleeyeen bambooyinkaas, kuwaas oo ka soo kala jeeda Congo iyo Japan labadaba.
“Waxaan qorsheyneynaa in aan dib u soo celinno taariikhda Shinkolobwe, si markaas ay noogu suurtagasho inaan Adduunka ogeysiinno,” ayuu yidhi Mombilo.
Meel ka baxsan Afrika
Taariikhda Shinkolobwe waxay billaabatay markii sannadku ahaa 1915-kii xilligaas oo la ogaaday inuu qani ku yahay macdanta uranium-ta, Waxaa waqtigaas DR Congo gumeysanayay Belgium.
Xilligaas si aad ah looma raadin jirin uranium-ta.
Uranium: waa nooc macdan ah oo loo yaqaanno erayga seyniska ah ee “pitchblende” oo ah luuqadda Jarmalka, kaas oo qeexaya in ay tahay dhagax aan qiimo lahayn.
Laakiin sannadkii 1938 ayaa lagu baraarugay qiimaha uranium-ta, xilligaas oo la hindisay sameynta hubka wax gumaada ee nuclear-ka. Xilligii dagaalkii Qaboobaa, Mareykanka wuxuu taageeray afgembigii militari ee Mobutu Sese Seko, si ay Shinkolobwe uga difaacaan in ay gacanta u gasho Midowgii Soviet.
Seynisyahankii la odhan jiray Albert Einstein ayaa markii uu maqlay in ay halkaas taallo uranium, wuxuu si deg deg ah warqad ugu diray madaxweynihii Mareykanka ee lagu magacaabi jiray Franklin D Roosevelt, isagoo kula taliyay in macdantaas laga sameyn karo tamar aad u weyn – oo xitaa lagu abuuri karo bambooyin ay awooddoodu sarreyso.
Sannadkii 1942, khubaradii militariga Mareykanka ayaa go’aansaday in ay soo iibsadaan uranium-ta, si ay ugu adeegsadaan mashruucii loo yaqaannay Manhattan.
Inkastoo ay godad macdan ah ku yaalleen gobolka Colorado ee waddanka Mareykanka iyo waliba Canada, ma jirin meel ka uranium badan Congo, marka la barbar dhigo guud ahaan caalamka intiisa kale.
“Kheyraadka ku jira Shinkolobwe waxaa lagu qeexay hadiyad dabiici ah,” ayuu yidhi Tom Zoellner, oo booqday godkaas macdanta Uranium-ta, mar uu wax ka qorayay arrimaha macdantan.
Wuxuu buuggiisa ku sheegay in godkaas uu soo saaray tamartii awoodda badneyd ee go’aanka ka gaartay Dagaalkii Labaad ee Adduunka. “Ma jirto meel laga helay xaddiga macdanta iyo uranium-ta nadiifta ah ee halkaas ku jirto.”
Mareykanka, Britain iyo Belgium ayaa ka wada qeyb qaadanayay sidii gacanta loogu dhigi lahaa macdantaas waxtarka weyn u lahayd mashruucii sameynta hubka awoodda badan ee nukliyeerka.
Laakiin dad reer Congo ah, oo markaas uu maamulayay gumeysigii Belgium, ayaa gacantooda ku qoday godkaas macdanta.
Markii si fiican loo qodayna waxaa tagay Injineerro ka tirsanaa milatariga Mareykanka. Dhammaan howlahan waxaa loo fulinayay si qarsoodi ah, waxayna ahaayeen sir khatar ah.
Isla sida uu qarsoodiga u ahaa mashruucii Manhattan ayuu godkana u ahaa mid aan la ogeyn.
Shinkolobwe waxaa xitaa laga tiray guud ahaan khariidadda caalamka. Sirtan waxaa la qarinayay muddo dheer ka dib markii uu dagaalka dhammaaday. “Waxaa lagu dadaalay in uranium-ta lagu tilmaamo mid ka timid dalka Canada, si indhaha looga weeciyo Congo,” ayey tidhi Williams.
Markii uu dagaalka idlaaday ka dib, godka macdanta ee Shinkolobwe wuxuu saldhig u noqday arrimhii sababta u ahaa dagaalkii qaboobaa ee dunida. Falceliska B ee Hanford waxaa loo adeegsaday in uranium-ta loo badalo hubka loo bixiyay Ninka Buuran kaas oo ah kan lagu dhuftay Nagasaki (Xuquuqda: Alamy)
Dalalka reer Galbeedka waxay markii dambe ka maarmeen ku tiirsanaanta uranium-ta ku jirta godkaas, maadaama ay wax badan kasii bacrimiyeen.
Laakiin si looga hortago in ay isticmaalaan dalalka kale ee daneynaya hubka nuclear-ka, waxaa godkaas loo sameeyay ilaalo joogto ah.
“Inkastoo Mareykanka uusan u baahneyn uranium-ta ku jirtay Shinkolobwe, haddana ma uusan dooneynin in midowgii Soviet uu gacanta ku dhigo,” ayey tidhi Williams, oo sharraxeysay arrintaas.
Markii ay Congo qaadatay xornimadeeda, sannadkii 1960-kii, godkii waa la xiray, meesha laga galana waa la shamiiteeyay. Laakiin reer Galbeedka waxay mar walba xaqiijin jireen in dowladdii damacsan in ay wax ka qaadato godkaas ay u ilaalineyso danahooda gaarka ah.
“Maadaama loo baahnaa uranium-ta, Mareykanka iyo dalalka kale ee awoodda leh waxay xaqiijiyeen in cidna aysan taabanin Congo,” ayuu yidhi Mombilo.
“Qof walba oo doonayay inuu madaxweyne ka noqdo DR Congo waa inuu iyaga hoos tago.”Tan ugu sii muhiimsan waxay ahayd in dalalka reer Galbeedka ay Congo ka ilaalinayeen nidaamka hantiwadaagga,” sida uu sheegay Zoellner.
Waxay reer galbeedku diyaar u ahaayeen inay gacan ka geystaan afgambintii madaxweynihii sida dimuqraaddiga ah loo doortay ee la odhan jiray Patrice Lumumba, ka dibna xukunka loo dhiibo kalitaliskii la odhan jiray Mobutu Sese Seko, sanadkii 1965.
Dadka reer Congo ee isku dayay in ay ka hadlaan sidii ay nolol fiican u heli lahaayeen waxaa loo weerarayay inay doonayeen hanti wadaag.
Dhaawac aan bogsanin
Mobutu waxaa ugu dambeyn xilka laga tuuray sannadkii 1997, laakiin xaaladda ku saabsan godka Shinkolobwe wali way sii dhibaateyneysaa Congo.
Dad u hanqal taagayay in ay maalqabeenno noqdaan, dhagaxyo qaali ahna helaan ayaa si aan sharci ahayn u qodan jiray godka agagaarkiisa.
Markii uu dhammaanayay qarnigii la soo dhaafay, godka Shinkolobwe waxaa dul taagnaa oo hunguri ka raadinayay qiyaastii 15,000 oo macdan qode iyo qoysaskooda.
Shilal badan ayaa halkaas ka dhacay.
Sannadkii 2004-tii, siddeed macdan qode ayaa ku dhintay, in ka badan toban kalena way ku dhaawacmeen ka dib markii god uu ku dumay iyagoo macdanta ka qodaya.
Waxaa soo baxay cabsi laga qabay in kooxo dhuumaaleysanaya ay uranium ka soo saaraan godkaas una gudbiyaan dalal cadow ah iyo kooxaha argagixisada. Walaaca ay arrintaas ka muujiyeen reer galbeedka ayaa sababtay in militariga Congo ay weeraraan xaafadaha u dhow godka.
inkastoo godka macdanta Shinkolobwe uu heysto macdan qiimo weyn ku fadhida, haddana waligiis dhaqaale kuma uusan soo celinin shacabka reer DR Congo ee dhibaatooyiinka dagaal, cudurro iyo gaajo ay saameeyeen.